Ny Covid 19 fisakafoanana dia lasa olana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Covid 19 fisakafoanana dia lasa olana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Jolay 25, 2020
Namaky 17 aho
Covid 19 Misakafo any ivelany
Life BC (Talohan'ny Covid 19)
Talohan'ny 19 taona ny fisakafoanana any ivelany dia tsy misy dikany; maka pizza na manao famandrihana amin'ny trano fisakafoanana vao haingana indrindra, tsy misy olana. Saingy, misaotra ny filoham-pirenena amerikana sy olom-boafidy hafa, ny fisotroana fisotroana amin'ny fisotroana miaraka amin'ny sakaizany, na ny fihinanana burger ao amin'ny trano fisotroana iray eo akaiky teo dia nahitana fahaiza-mandray fanapahan-kevitra sy vokadratsin'ny fidinana an-dranomasina na fitsambikinana trampolay… mety hampidi-doza ny rantsambatana sy ny ainy. Famaritana raha misokatra na mihidy ny toerana fisakafoanana, avelao hipetraka eo an-tokotany sy any ivelany na ny fivoahana fotsiny, manana menus tsy azo kitihina, ekeo ny PayPal na ApplePay ary nohavaozin'ny rafitra HVAC ny sela angovo. Ny zavatra isan'andro dia mieritreritra bebe kokoa noho ny mety.
Raha manandrana manapa-kevitra ny mpanjifa raha tokony misakafo na misakafo hariva, ny fahasarotan'ny fananana trano fisakafoanana dia azo alaina sary an-tsaina fotsiny ary ny fisavorovoroan'ny lalàna sy fitsipika vaovao noforonin'ny mpitantana ny governemanta sy ny olom-boafidy manana traikefa voafetra na tsy fahalalana momba ny trano fisakafoanana dia nofy ratsy fotsiny.
Covid 19 Tonga ary misakafo ny trano fisakafoanana
Rehefa nanomboka nanisa ny fiparitahan'ny Covid 19 tany Wuhan, Sina (na mieritreritra fa natomboka tany China) ireo mpahay siansa, ary naely tamin'ny media ny fampahalalam-baovao tamin'ny mpanjifa, dia niposaka tsimoramora tamin'ireo mpitondra manerantany fa tsy viriosy hafa fotsiny io; ity iray ity dia lehibe kokoa ary sahy kokoa noho izay zavatra rehetra hitan'izao tontolo izao nandritra ny am-polony taona maro ary nofaritana ho areti-mandringana.
Ny valiny xenophobic amin'ny valanaretina? Nijanona ny fisakafoanana tany amin'ny trano fisakafoanana sinoa ny Amerikanina, ka nahatonga ny fikatonan'ny toerana fisakafoanana aziatika nanerana ny firenena. Ny vaovao tsara dia ny fahazoana misakafo any amin'ny sinoa fisakafoanana sinoa satria voafetra ny safidy fisakafoanana / fividianana sakafo, ka mamela ny fidinana sy fividianana sinoa ho lafo ary takatry ny vidiny.
Nisy ireo mponina sy mpitsidika sasany no namoaka ny fanirian'izy ireo tsy hihinana sakafo ivelan'ny trano amin'ny alàlan'ny famonosana bara sy alàlan'ny resaka tsy voasarona any amin'ireo arabe manodidina. Rehefa mihabe ny vahoaka sy ny tabataba dia manentana ireo masoivohom-panjakana ireo mponina mba hanidy ny bara sy trano fisakafoanana manafintohina, mamela ny orinasa madinidinika amin'ny lalao fahitana tsy hita farany… indray andro avela hisokatra izy ireo, ny ampitso dia voasazy sy / na voatery izy ireo manidy. Vitsy ny indostria afaka mahatohitra io fisalasalana io ary ho tafavoaka velona. Ny indostrian'ny trano fisakafoanana, miorina amin'ny orinasa kely, dia tsy miomana ary satria miasa amin'ny sisin-tany kely izy ireo dia mety hiteraka ny fahafatesany ny Covid 19.
Ireo mpanjifa dia miovaova
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny fisokafan'ny trano fisakafoanana vaovao dia matetika nihoatra ny fangatahan'ny mpanjifa ary, miaraka amin'ny fitomboan'ny vidim-piainana, ny fidiram-bola dia tonga hatrany amin'ny fahalavoana. Tamin'ny taona 2019, nahita ny fatiantoka mety hitrangan'ny fatiantoka i Pizza Hut sy Wendy's NPC International. Ny mpandraharaha Burger King (Carrols Restaurant Group) dia nanapaka ny fandaniam-bola hitehirizana vola sy handoavana trosa. The Coalition mahaleo-tena tsy miankina naminavina fa 85% ny trano fisakafoanana tsy miankina afaka mikatona maharitra amin'ny faran'ny taona.
Fitsabahan'ny governemanta. Tombontsoa ho an'iza?
Ny fonosana fanampiana mitentina $ 2 tapitrisa lavitrisa natolotry ny governemanta amerikana tamin'ny volana martsa dia nahitana programa ara-bola mikendry ny hitazona ny toekarena tsy hianjera eo afovoan'ny areti-mandringana Covid 19 sy ny fahavoazana mialoha. Ny indostrian'ny trano fisakafoanana, iray amin'ireo sehatry ny fandraharahana tratry ny krizy ara-toekarena mafy indrindra, dia natolotra fantsona fanampiana vaovao misaraka amin'ny programa fampindramam-bola SBA.
Ny volan'ny Program Payroll Protection Program (PPP) dia natokana ho an'ireo orinasa tratran'ny areti-mifindra ary azo ampiharina amin'ny fandoavana ny karamany, ary koa ny fanofana sy ny fandoavam-bola tsy arakaraka ny findramam-bolam-panjakana hafa. Ny tahan'ny zanabola dia nidina tamin'ny 4 isan-jato ary ny saram-bolan'ny mpampindram-bola dia nesorina. Ho fanampin'izany, ireo mindrana orinasa kely dia mety hanana ampahany amin'ny indram-bola voavela heloka rehefa nampiasaina izy ireo mba hanonerana ny mpiasa sy ny vidin'ny fikolokoloana orinasa sasany. Manokana, ny vola voavela dia hifanaraka amin'ny lanin'ny mpampindram-bola amin'ny karama, ny trosa arahin'antoka sy ny hofan-trano ary ny vidin'ny fampiasana. Ny sandan'ny famelan-keloka dia ho lasa prorated mifototra amin'ny fiovan'ny karama hatramin'ny herintaona lasa izay. Ny mpiasa averina amin'ny laoniny aorian'ny famonosana azy dia horaisina ho toy ny mpiasa tsy nandao ny karamany ary ny isa natokana dia tsy ho isaina ho fidiram-bola amin'ny fandoavana ny hetran'ny mpampindrana.
Satria efa nijanona ny serivisy latabatra anaty trano any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, tsy afaka nahazo torohevitra intsony ireo mpizara. Io drafitra io dia ahafahan'ny orinasa miasa feno hametraka ny karamany sy ny fanisana ataon'izy ireo amin'ny karama alain'ny mpiasa miandry ankehitriny fa tsy ny karama ampaham-bola. Ireo mpiasan'ny trano fisakafoanana sy mpiasa hafa mahafeno fepetra amin'ny fiantohana tsy an'asa aorian'ny nandroahana azy ireo dia afaka mahazo fandoavana fanampiny $ 600 isan-kerinandro mandritra ny efa-bolana.
Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny vola federaly dia niditra an-tsokosoko tany amin'ny kaontin'ny banky misy rojo fisakafoanana lehibe, namela kely ho an'ny orinasa kely sy mahaleo tena - izay, tamin'ny faran'ny andro, dia tsy nahazo afa-tsy 5 isanjaton'ny fanampiana azo na dia 60 isan-jaton'ny nangataka vola ireo trano fisakafoanana kely.
Vokatry ny fomba ampiasaina hanidiana trano fisakafoanana (ampahany fa tsy fanidiana tanteraka) dia midika fa ny fanidiana dia tsy nahomby tamin'ny fiantohana fiantohana orinasa ho an'ny trano fisakafoanana maro. Fepetra fiantohana hafa: tsy tafiditra ny fandrakofana raha misy valanaretina, hetsika ataon'ny manam-pahefana sivily na fahasimbana ara-batana ilaina amin'ny trano.
Mickensey.com dia manombana fa amin'ireo toerana fisakafoanana 650,000+ US izay niasa tamin'ny taona 2019, manodidina ny iray amin'ny dimy - na mihoatra ny 130,000 no hakatona mandrakizay. Ny trano fisakafoanana tsy miankina dia hahita ny haavon'ny fanidiana farany satria marefo kokoa izy ireo (sary tsy dia voafaritra mialoha, fahaiza-manao nomerika voafetra, fanamafisana ambany ny fisafidianana menio miorina amin'ny sandany), ary maodely fandraharahana tsy mahasoa (sisiny manify ary fidirana an-drenivohitra voafetra). Ny ampahany tsy miankina amin'ny toerana dia mety hianjera avy amin'ny 53 isan-jato amin'ny 2019 ka hatramin'ny 43 isan-jato amin'ny 2021.
Ny fanidiana ny trano fisakafoanana dia miteraka voka-dratsy eo amin'ny rojo famatsiana. Indostria miankina amin'izany famokarana sakafo, mpizara divay sy toaka, fandefasana entana, mpamatsy lamba rongony, mpanjono, mpamatsy fambolena - ary koa mpitendry zavamaneno, mpivarotra voninkazo ary serivisy fanaterana - dia hahatsapa ny fiantraikan'ny fanidiana trano fisakafoanana rehetra.
Hatramin'ny volana aprily 2020, asa 20.5 tapitrisa amerikana no nesorina ary 5.5 tapitrisa teo ho eo no teo amin'ny sehatry ny trano fisakafoanana. Ny Bureau of Statistics momba ny asa dia nitatitra fa ny asa karama amin'ny serivisy sakafo sy trano fisotroana toaka dia nidina hatramin'ny 11.9 tapitrisa tamin'ny volana martsa ka lasa 6.4 tapitrisa tamin'ny volana aprily. Raha ny isan'ny volana febroary (12.3 tapitrisa), talohan'ny krizy Covid 19 dia nahatratra ny fara tampony ary ny fanjakana dia namoaka ny fijanonana amin'ny baikon'ny trano, dia olona 5.9 tapitrisa amin'ny indostrian'ny trano fisakafoanana no lasa tsy an'asa ary tsy tafiditra ao anatin'izany ireo olona izay tsy tao anatin'ny karama (ie, mpiasa tsy manana taratasy) sy ny olona rehetra izay nametraka fitakiana tombotsoan'ny tsy fananan'asa hatramin'ny nanangonana ny antontan'isa tamin'ny aprily teo.
Ireo mpanjifa Quarantined
Vao tamin'ny volana aprily 2020, ny fidirana tao amin'ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana dia nihena 89 isan-jato eraky ny firenena raha oharina tamin'ny taon-dasa (Cuebiq, orinasam-pikarohana momba ny fivezivezena miorina amin'ny fizotran'ny mpanjifa). Rehefa nosokafana ny bara dia niverina ny mpijery sasany ary hatramin'ny 7 Jolay dia niverina 48 isan-jato ny fitsidihana ny firenena tamin'ny taon-dasa. Ny fitsidihana ny trano fisotroana sy New Jersey dia nihena 72 isan-jato na dia niverina tany amin'ny ambaratongam-pirazanana mialoha aza ny bara any Wyoming sy North Dakota.
Hidinao. Mizara mihoatra ny ilaina
Toa misy rohy misy eo amin'ny bara sy ny fampitana virus. Gerardo Chowell-Puente, profesora momba ny epidemiolojia sy biostatistika ao amin'ny Georgia State University dia nahita fa ny bara dia mety hampidi-doza kokoa noho ny toerana hafa an-trano (izany hoe fivarotana antsinjarany sy sinema) noho ny fifandraisana akaiky eo amin'ny mpanjifa. Ny alikaola koa dia mety hitarika amin'ny tsy firaharahiany ireo paikadim-pitandremana sy fiarovana.
Ankoatra ny ahiahy momba ny fiparitahan'ny virus amin'ny habakabaka mihidy dia ny risika lehibe kokoa amin'ny bara satria any amin'ireo toerana ireo ny olona nefa tsy misaron-tava (hisotro, hisakafo ary hiresahana) ary ny firesahana / hiakiaka dia manaparitaka ny viriosy. Ny salan'isan'ny marary nampidirina hopitaly dia nihena hatramin'ny 50 taona (40 isan-jato). Toa tsy mora tohina amin'ny Covid 19 mahery ny tanora; na izany aza, tsy afa-maina tanteraka izy ireo ary na dia mety tsy misy soritr'aretina aza izy ireo dia mety ho mpitondra ny virus ihany ary mandatsaka / mizara izany amin'ny olon-kafa izay ifandraisany.
Open? Close? Mamerina?
Tamin'ny 16 Jolay 2002, ny governoran'i New York, Mario Cuomo dia namoaka fitsipika vaovao momba ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana milaza fa tsy afaka manolotra alikaola amin'ny olona tsy manafatra sy misakafo koa izy ireo. Nambarany ihany koa fa ny serivisy rehetra eo an-tampon'ny bar dia tokony ho an'ny olona mipetraka eo amin'ny seza izay misy 6 metatra ny elanelany na sarahina sakana ara-batana. Vokatry ny elanelana ara-batana dia miasa latsaky ny 100 isan-jato ny trano fisakafoanana ary maharitra ela kokoa ny famadihana latabatra ary mitaky fiofanana momba ny zava-drehetra ny protokolônina vaovao manomboka amin'ny fanadiovana lovia ka hatramin'ny fiarovana ny zava-pisotro.
Azo antoka fa vaovao! Tsara Kokoa? Angamba.
Ny fanokanana habakabaka (kely kokoa) sy ny rivotra (lehibe kokoa) dia hanova ny famolavolana trano fisakafoanana miaraka amin'ny fifantohana amin'ny toerana voafetra na tsy misy.
Ny fanivanana ny habaka miditra amin'ny rivotra dia manakiana ny fototry ny injeniera amin'ny famolavolana; Ny teknolojia toy ny hazavana ultraviolet-C, ny fanamafisana ny bi-polar, ny filtration rivotra manara-penitra avo lenta ary ny teknolojia vaovao hafa dia hohalalinina noho ny fiantraikany eo noho eo, ny fisian'ny fampiharana ary ny fampiharana azy.
Ny fahadiovana sy ny fanadiovana no laharam-pahamehana. Ny teknolojia vaovao dia manara-maso fomba fidiovana henjana henjana eo anoloana sy ao an-trano, ary mandritra ny fizotran'ny fanaterana.
Fidirana bebe kokoa amin'ny vokatra ara-pahadiovana (famafana, fanadiovana) amin'ny latabatra sy ny faritra ho an'ny daholobe.
Kitapo, vera ary lovia diovina eo anilan'ny latabatra (na entina amin'ny latabatra fonosana) ho fanomezan-toky ny mpanjifa. Ny fisaronana ny lovia fisakafoanana dia nanala ny latabatra latabatra.
Fanesorana ny shakers sira sy dipoavatra; soloina fonosana na fangatahana.
Ny servers dia nametraka tao ambadiky ny kaontera tao amin'ny trano fisakafoanana nanolotra buffet na bara salady.
Natosika any amin'ny fanariam-bola ny vola satria mety hitondra virus ilay vola.
Ny baiko momba ny sakafo sy zava-pisotro apetraka amin'ny alàlan'ny teknolojia finday. Manomboka amin'ny fizahana menio sy ny filaharana ka hatramin'ny fandoavam-bola eo noho eo, ny smartphone dia manolo ny fizotry ny fandaminana sy ny fandoavam-bola rehetra, hisorohana ny fanomezana carte de crédit amin'ny mpiasa.
e-Raisina manolo ny tapakila taratasy.
Ny robot dia nampiasaina be tamin'ity indostrian'ny asa ity; ao an-dakozia hamono otrikaretina faritra; hanaterana sakafo amin'ny latabatra sy ho an'ny mpanjifa amin'ny toerana akaiky.
Robot baristas dia manao cappuccinos - amin'ny taha 100 isan'ora. Ny mpanjifa dia manafatra amin'ny alàlan'ny findainy marani-tsaina ary mahazo sms rehefa vonona ny fisotroana. Ny fifanakalozana iray manontolo dia tsy misy fifandraisana ary misy ny vidin'ny asa.
Manolo ny mpiasa ao an-dakozia ny robot. Ny trano fisakafoanana Kissaki dia manolotra robot mpamokatra sushi. Ny masinina iray dia mamokatra lambam-bary, ny iray kosa mamorona bolam-bary ho an'ny nigiri, ary ny horonana fahatapahana fahatelo. Mamokatra tanimbary 1100 isan'ora ny masinina amki.
Ny automatisation an'ny birao dia mandray ny trano any an-trano ho an'ny trano fisakafoanana haingana (QSR) ary koa ny fisakafoanana mahazatra sy tsara. Ny efijery horonan-tsary ao an-dakozia dia manatsara ny fahombiazan'ny filaminana sy ny filaminana.
Ny valin'ny Covid 19 sy ny hevitra fa ny aretina dia nafindra tamin'ny biby tamin'ny alàlan'ny fanjifana hena, dia miteraka fironana amin'ireo hena miorina amin'ny zavamaniry ho safidy mahasalama kokoa. Ho fanampin'izany, ny trano fisakafoanana dia maniry ny hanampy hena madio kokoa amin'ny menus.
Famandrihana mialoha ho an'ny sakafo sy zava-pisotro vita amin'ny alàlan'ny telefaona finday na fitaovana elektronika hafa.
Ny fihenan'ny fangatahana nahandro hafakely sy ny fahalianana bebe kokoa amin'ny famatsian'ireo mpamboly ao an-toerana, ny jono ary ny mpahandro artista.
Ny lakozia dakozia sy / na lakozia komisary ivelan'ny toerana dia lasa fenitra ho an'ireo mpikirakira marobe.
Ny traikefa ananan'ny mpanjifa nohavaozina sy ny fahombiazany dia mitombo amin'ny alàlan'ny safidin'ny kaody finday / kiosk, rafitra famandrihana / fikojakojana / fanangonana tsy misy fampiasa amin'ny alàlan'ny URL, kaody QR na tagan'ny NFC.
Ny mpanjifa dia nanosika hiverina sy hampiakatra ny salanisan'ny mpitsidika azy ireo amin'ny alàlan'ny programa tsy fivadihana mora azo avotana amin'ny finday. Tombontsoa ho an'ny orinasa ny fahazoan'izy ireo hevi-dehibe momba ny fihetsiky ny mpanjifa hahafahan'izy ireo mifantoka amin'izay miasa mba hampitomboana ny ROI sy hahazoana antoka ny fiverenana mitsidika.
Ny oniversite sy ny orinasa teknolojia dia mamolavola fampiharana hanarahana ny fihanaky ny areti-mifindra izay ilaina amin'ny mpitantana sy ny mpiasa.
Fiainana ankoatran'ny Covid 19
Mpanjifa mba hamonjy
Ho an'ny ho avy azo vinavinaina dia hiasa amin'ny 50 isan-jato (na latsaka) ny trano fisakafoanana. Sarobidy ny seza rehetra ary manana andraikitra lehibe ny mpiaro amin'ny fihazonana ny indostrian'ny fisakafoanana .:
Raha tara ianao, na tsy misy fampisehoana, mandefasa hafatra amin'ny maître d 'ary ampahafantaro azy ireo ny fiovana.
Ferano ny fotoana laninao sy ny vahininao ny latabatra.
Ny fitodian'ny vahiny dia zava-dehibe amin'ny fidiram-bola farany ambany. Raha nahavita sakafo hariva sy fisotroana ianao dia aloavy ny takelaka (miaraka amin'ny tendrony malala-tanana) ary avelao ny trano fisakafoanana na mifindra any amin'ny bara na toerana hafa.
Alohan'ny hametrahana fotoana fisakafoanana voalohany ho an'ny trano fisakafoanana dia diniho ny manomboka aloha na ho haingana - indrindra raha anisan'ny vondrona lehibe ianao.
Sasao ny tananao na ampiasao sanitizer raha vantany vao miditra amin'ny toeram-pisakafoanana ianao ary manandrana tsy mitondra entana be dia be (avelao any an-trano ny kitapo). Vao mainka sarotra amin'ny mpiasan'ny trano fisakafoanana ny mitazona ny toerana madio sy ny mpanjifa 6 metatra eo ho eo i Clutter.
Aza hadino ny fihetsika manokana. Mety halaim-panahy ny hitsambikina hamihina namana na handehandeha manerana ny trano fisakafoanana hiarahaba olona iray; na izany aza, tsara kokoa ny mijanona mipetraka mba hahafahan'ny mpiasa miandry hihetsika mora sy haingana amin'ny alàlan'ny efitrano fisakafoana.
Mahareta amin'ny mpiasa miandry. Rafitra vaovao novolavolaina sy ampiharina ary tsy ny fihetsika rehetra akory no hahomby sy hahomby tahaka ny tamin'ny "taloha". Omeo fitsaharana ny trano fisakafoanana sy ny mpiasa ary ho tsara fanahy sy hahatakatra ianao rehefa miatrika fanamby vaovao.
Mialà amin'ny loza mety hitranga
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fisakafoanana any amin'ny trano fisakafoanana dia tsy atahorana. Eleanor J. Murray, ScD, profesora mpanampy amin'ny epidemiolojia ao amin'ny Sekolin'ny Fahasalamam-bahoaka any Massachusetts, Massachusetts, dia nanolo-kevitra fa ny mpiaro ny trano fisakafoanana dia mandinika ny fotoana lanin'ny olona hafa sy ny akaiky azy aminao; na mipetraka ianao / mijoro amin'ny ety ivelany na anaty trano (misy rivotra / tsy misy rivotra); tena feno olona tokoa ny habaka manodidina anao ary raha ny olona miaraka aminao no olona ifandraisanao matetika.
Na inona na inona fitandremana napetraky ny trano fisakafoanana dia tsy hanala ny risika ny fepetra fiarovana azon'izy ireo. Ny tsara indrindra dia ny mipetraka eo ivelany izay hiparitahan'ny latabatra farafahakeliny 6 metatra na mihoatra ary saron-tava no apetraka alohan'ny sy aorian'ny fisakafoanana. Dr. Stephen Berger, manam-pahaizana momba ny areti-mifindra ary mpiara-manorina ny Infectious Diseases and Epidemiology Network dia nanoro hevitra ny hisakafo ao amin'ny habaka "malalaka sy misokatra ary misy rivotra" - any ivelany, raha azo atao. Nanoro hevitra ihany koa izy alohan'ny hipetrahana - matokia fa manao sarontava ireo mpiasa ary saron-tava ny orony sy ny vavany. Na i Dr. Anthony Fauci, izay epidemiolojista tranainy, dia mailo ny amin'ny trano fisakafoanana, ary, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Market Watch farany teo dia nilaza hoe: "Tsy handeha ho any amin'ny trano fisakafoanana aho izao." Ho an'ny olona misakafo any ivelany dia nanolo-kevitra ny hipetraka eo an-tokotany izy izay mametraka tsara ny elanelana misy eo anelanelan'ny latabatra.
Ny volana vitsivitsy manaraka dia tsy ho mora ho an'ny trano fisakafoanana na mpanjifa.
Robot, Drôna, fiara mizaka tena no hamolavola ny fizahan-tany ...
Nosy Seychelles: Utopia iasananao
Nampitandrina ny mpitsidika momba ny vokatra azo avy amin'ny sunscreen i Hawaii
Manambara tsiambaratelo ny vondrona IMEX
Anisan'ny tianao indrindra ny Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara ...
Mampientam-po noho i Seychelles mirakitra mihoatra ny 100,000 ...